Top 5 serum Kiehl's tốt, được yêu thích nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 serum Kiehl’s tốt, được yêu thích nhất hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 serum Kiehl’s tốt, được yêu thích nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Kumelwe ukhethe uhlobo i-serum Phakathi kwemikhiqizo eminingi namamodeli ama-serum emakethe namuhla, cishe kuyinkinga eyenza abesifazane abaningi badideke futhi babe nzima. Futhi ngokusho kolwazi, impendulo esiyiqoqe kumakhasimende wangaphambilini, umugqa I-serum kaKiehl kusukela e-United States ukukhetha okuphezulu, ukuthola amavoti amakhulu. Ngakho esihlokweni sanamuhla ake sihlole lo mugqa we-serum futhi sibone ukuthi umkhiqizo muhle ngempela njengoba kunamahemuhemu!
1 Mayelana ne-Kiehl’s Serum Brand
2 Ingabe kufanele ngisebenzise i-serum ka-Kiehl?
3 Amaserum e-Kiehl aphezulu angu-5 asebenza kahle kakhulu futhi anosizo lwesikhumba
3.1 3.1 I-Serum ka-Kiehl Ebalulekile Yokuqinisa Isikhumba Eqeda Ukuguga
3.2 3.2 Iserum ye-Kiehl’s Daily Revive Concentrate
3.3 3.3 I-Serum ka-Kiehl Ilungisa Ngokusobala Isixazululo Sendawo Emnyama
3.4 3.4 I-Kiehl’s Precision Lifting & Pore-Tightening Concentrate Serum
3.5 3.5 I-Kiehl’s Midnight Recovery Concentrate Night Serum
Mayelana ne-Kiehl’s Serum Brand
Mhlawumbe izimonyo zikaKiehl azisajwayelekile kwabesifazane banamuhla. I-Kiehl’s brand yinkampani yezimonyo evela e-United States futhi yasungulwa ngo-1851. Kuze kube manje, iphethwe “i-tycoon” emkhakheni wobuhle be-L’Oreal. Okuhlangenwe nakho kuka-Kiehl ekuthuthukiseni imikhiqizo yezimonyo yekhwalithi enhle. Ngaphezu kwalokho, ngokuphathwa kweqembu le-L’Oreal, ingqikithi yezimonyo zika-Kiehl igcinwa ngokugcwele.
Ngaphezu kwalokho, u-Kiehl uphinde wazuza impumelelo eminingi, efakazelwa ngochungechunge lwezinombolo ezikhuluma ngokuthengisa okukhulu. Kuze kube manje, uhlobo luka-Kiehl lukhona emazweni angaphezu kuka-250 futhi luphethe izindawo zokudayisa ezingaba ngu-2000 emhlabeni wonke. Okukhona kuzo izitolo ezingaphezu kuka-300, zonke ezinezindawo ezikhangayo futhi eziheha inqwaba yamakhasimende. Imikhiqizo kaKiehl ikakhulukazi izihlanzi, amathoni, izinto zokuthambisa, amaserum…
Ingabe kufanele ngisebenzise i-serum ka-Kiehl?
Esikhathini esidlule, sithole imibuzo eminingi mayelana nokuthi singasetshenziswa yini I-serum kaKiehl noma cha? Ngokusho kokwabelana kodokotela besikhumba abahamba phambili kanye nempendulo yamakhasimende angaphambilini, impendulo inguyebo.
Okokuqala, kufanele sihlole imvelaphi yomkhiqizo, ovela kumkhiqizo we-Kiehl weqembu elidume umhlaba wonke. Izigaba ukusuka ekukhethweni kwempahla eluhlaza kuye ekulungiseni nasekuhlolweni ziqinisekisiwe ukuthi zizolandela inqubo eqinile, ngakho-ke ivikeleke ngokwedlulele. Ngaphezu kwalokho, umklamo wokupakisha uqinile futhi uvumelana nemiklamo eminingi ongakhetha kuyo.
Olandelayo, I-Essence ka-Kiehl Iningi lezithako likhishwa emvelweni, ngakho-ke liphephile ngokuphelele futhi alinalutho ngokuphelele esikhumbeni, ngisho nesikhumba esibucayi okunzima ukusiphatha. I-Kiehl’s Serum iphinde ibe nokuthungwa okuvamise ukuba sesimweni sokuthungwa, uketshezi olulula noma unamathisele noma ijeli kuye ngomkhiqizo we-serum. Kodwa ngokuvamile, imikhiqizo ye-serum ye-Kiehl inejubane lokungena ngokushesha esikhumbeni futhi ayibangeli ukucasuka noma ukungakhululeki esikhumbeni.
Izipesheli Zomkhiqizo I-serum kaKiehl Ivamise ukuba nephunga elipholile, elimnandi le-herbal. Ngenxa yalokho, kusiza abasebenzisi ukuthi bazizwe bekhululekile phakathi nenqubo yabo yokunakekela isikhumba.
>>>Bheka ku: [Review] I-serum kavithamini C ehamba phambili eyi-10 namuhla
Amaserum e-Kiehl aphezulu angu-5 asebenza kahle kakhulu futhi anosizo lwesikhumba
Njengoba kushiwo ngaphambili, I-serum kaKiehl ezahlukene kakhulu kusukela izithako ukusebenza ngempumelelo. Kodwa-ke, uma ufuna ukuthenga i-serum ethembeke kakhulu namuhla, akufanele nakanjani uphuthelwe Ama-serum angu-5 aphezulu ka-Kiehl ngemva.
3.1 I-Serum ka-Kiehl Ebalulekile Yokuqinisa Isikhumba Eqeda Ukuguga
Okwamanje Iserum ka-Kiehl’s Anti-Aging Lo mkhiqizo unomphumela ojulile kwabesifazane abaneminyaka yobudala besikhumba, izinyawo zegwababa, isikhumba esinyakazayo siqala ukwakha. Okokuqala nje, le Kiehl’s Vital Skin-Strengthening Super Serum iyiserum engasindi emunca kalula esikhumbeni. Ngaphandle kwalokho, le serum elwa nokuguga iphinde ilungele zonke izinhlobo zesikhumba, okuhlanganisa nesikhumba esizwela kakhulu nezinduna, ngaleyo ndlela inikeza umphumela obonakalayo wokunciphisa imibimbi, esiza isikhumba somsebenzisi sikhanye futhi siphile.
Ngaphandle kwalokho I-Essence ka-Kiehl Lo mkhiqizo wokulwa nokuguga nawo unohlu lwesithako lwama-molecule amancane e-Hyaluronic Acid. Ngenxa yalokho, umphumela ungena ngokujulile esikhumbeni, unikeze umswakama futhi unciphise isikhumba. Ngaphandle kwalokho, umkhiqizo uqukethe ne-Adaptogen herbal complex okuhlanganisa impande ebomvu ye-ginseng, iqabunga le-basil nesithelo sepenguin, njll imvelo, inciphisa ngokubonakalayo imibimbi ukuletha isikhumba esikhanyayo, esinempilo.
Akukhona lokho kuphela, umkhiqizo i-anti-aging serum Lokhu kungase futhi kunikeze amanzi esikhumbeni, kusize isikhumba sakho sihlale simanzi. Iphinde igweme ukucasuka kwesikhumba.
Intengo yokuthengisa yesithenjwa: 1,550,000 VND.
3.2 Iserum ye-Kiehl’s Daily Revive Concentrate
I-Daily Reviving Concentrate ka-Kiehl ingathathwa njengomunye wabathengisi abahamba phambili bomndeni wakwa-Kiehl, futhi iphinde ingene ohlwini lwamaserum okunakekelwa kwesikhumba angcono kakhulu emakethe. Umkhiqizo unokuthungwa okuzacile futhi okukhanyayo okunombala ophuzi kalamula okhanyayo futhi ucishe ube sobala. Ngaphezu kwalokho, le essence uma isetshenziswa esikhumbeni izoletha umuzwa omnandi kakhulu ngephunga elithambile, ngaleyo ndlela usize isikhumba sakho ukuba siphumule ngokuphelele.
Mayelana nohlu lwesithako oluyinhloko lwe-Daily Reviving Concentrate luzofaka amafutha embewu ye-tamanu, amafutha kabhekilanga kanye ne-ginger essence. Ikakhulukazi, amafutha embewu ye-tamanu avela e-French Polynesia ukuze athole umphumela opholile wezindawo zesikhumba ezilimele. Ngesikhathi esifanayo, inikeza izakhi ezidingekayo zokondla isikhumba esithambile. Futhi i-sunflower isebenza ukuvuselela isikhumba udonga oluvimbelayo, ukuvikela isikhumba kuma-ejenti ayingozi emvelweni, ukubuyisela isakhiwo sesikhumba ngokushesha. Okokugcina, uwoyela we-ginger ukuze ukwazi ukuvikela isikhumba kuma-radicals mahhala, ukuvimbela isikhumba kusuka ku-oxidizing nokuguga ngaphambi kwesikhathi.
Ngaphandle kwalokho I-serum kaKiehl Lo mkhiqizo ubuye ube nesakhiwo esincane futhi esilula, esingena kalula esikhumbeni, esihlanganiswe nephunga elihlanzekile le-herbal elizokusiza ukuthi uthandane ngemva kokusetshenziswa kokuqala. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ulungele isikhumba esinezinduna kanye nesikhumba esibucayi, futhi kufanele usetshenziswe ngezinsuku ezishisayo zasehlobo.
Intengo yokuthengisa yesithenjwa: 1,590,000 VND.
>>>Bheka ku: Ama-serum angu-10 aphezulu esikhumba esinamafutha, esithandwa yizinduna, isikhumba esikhanyayo ngokwedlulele
3.3 I-Serum ka-Kiehl Ilungisa Ngokusobala Isixazululo Sendawo Emnyama
Lena i-serum yokwelapha amabala amnyama, izinduna zemiphumela emihle kakhulu kanye nokondla isikhumba ngempumelelo, futhi ingenye yemigqa ye-serum ethengiswa kakhulu ye-Kiehl’s. Lo mkhiqizo unokuqina, ukuthungwa okubushelelezi okumuncwa ngokushesha esikhumbeni, ngaphandle kokuluma nokucasuka lapho usetshenziswa. Ukwengeza, lapho le essence ingena esikhumbeni, kuzoba nefilimu ekhanyayo ethambisa isikhumba, esiza ukuvikela nokondla isikhumba kakhulu. Thayipha i-acne serum Lokhu akunaphunga ngakho kuphephile kuzo zonke izinhlobo zesikhumba, okuhlanganisa nezinhlobo zesikhumba ezicasuka kalula.
Ngaphandle kwalokho I-serum ka-Kiehl ye-acne futhi ungumnikazi wefomula entsha uma iqukethe i-birch essence emhlophe evela emvelweni enempilo. Kuhlanganiswe nokukhishwa kwe-peony, kuyasiza ukuphakamisa ithoni yesikhumba, ukuthuthukisa ithoni yesikhumba ngokubonakala ngemva kwesikhathi esifushane sokusetshenziswa. Ikakhulukazi isithako i-3-O-Ethyl Ascorbic Acid (okuphuma ku-vitamin C) isiza ekuthuthukiseni amabala amnyama kanye ne-pigmentation esikhumbeni, ngaleyo ndlela kusize ngempumelelo ukwenza isikhumba sikhanye futhi sithambile.
Ngaphezu kokuthuthukisa umbala, ukusekela ukwelashwa kwama-acne, umkhiqizo ungasetshenziswa ukulungisa ngisho nokukhipha ezinye izindawo zesikhumba njengezandla, intamo noma isifuba. Nokho, ukusebenza kahle komkhiqizo kuzoncika empilweni yesikhumba somuntu ngamunye.
3.4 I-Kiehl’s Precision Lifting & Pore-Tightening Concentrate Serum
I-Precision Lifting & Pore-Tightening Concentrate futhi iwumugqa womkhiqizo we-serum owaziwa kakhulu ngenxa yomklamo wayo omuhle futhi owubukhazikhazi. Ngaphezu kwalokho, lokhu kubuye kube ingqikithi eyintandokazi yabesifazane abaningi abanezinzuzo zokulwa nokuguga, ukuqina kwesikhumba nokuqina kwe-pore okuphumelelayo ngemva kwesikhathi sokusetshenziswa. Ngaphandle kwalokho, i-Precision Lifting & Pore-Tightening Concentrate okwamanje ihlinzekwa emakethe ngamakhono amabili angu-50ml no-75ml ukuze amakhasimende akhethe kuwo.
Futhi umkhiqizo I-serum kaKiehl Futhi inokwakheka okubushelelezi, okuncanyana nokulula, okukwazi ukumunca esikhunjeni ngokushesha okukhulu futhi ingabangeli umuzwa wokunamafutha. Ngakho-ke, ifaneleka ezinhlotsheni eziningi zesikhumba, kuhlanganise nesikhumba esibucayi esivame ukucasuka.
Mayelana nohlu lwesithako oluyinhloko lwe-Precision Lifting & Pore-Tightening Concentrate, kufanele kushiwo ukuthi luhle kakhulu. Okokuqala, lokhu kuyinhlanganisela yezithako eziyivelakancane enemvubelo entsha ekhethiwe ngokucophelela ukuze uthuthukise ngokusobala isikhumba sakho futhi uqinise izimbotshana ebusweni besikhumba. Ngakolunye uhlangothi, uwoyela obalulekile weGeranium nawo ugaywe ngaphansi kwezimo eziqinile ngesitimu esihlanzekile, ngakho-ke ungathuthukisa ukuqina, ususe amaseli afile asanamathiselwe. Ngesikhathi esifanayo I-serum yokuqinisa imbobo Lokhu kusiza futhi ukulwa ne-oxidation, ukusungula izingqimba zamangqamuzana amasha futhi kukubuyisele isikhumba esibushelelezi, esibushelelezi, nesentsha.
3.5 I-Kiehl’s Midnight Recovery Concentrate Night Serum
Iserum yokugcina ka-Kiehl esifuna ukuyethula namuhla ibizwa nge-Kiehl’s Midnight Recovery Concentrate. Umkhiqizo I-serum kaKiehl Lokhu kunokuthungwa okucacile, okuwuketshezi okunekhono eliphezulu kakhulu lokuthambisa isikhumba. Ngaphezu kwalokho, ikhono lokungena esikhumbeni salo mugqa we-essence nalo lishesha kakhulu, lingashiyi ngokuphelele umuzwa wokugubha noma ukungakhululeki esikhumbeni sakho ngemva kokusetshenziswa.
Mayelana nengxenye yethebula yale Midnight serum line nayo iphephe kakhulu futhi ayinabungozi esikhumbeni somsebenzisi. Lokhu kungenxa yokuthi ifomula inokukhishwa kwemvelo okungafika ku-98.6%. Ngesikhathi esifanayo, ayinayo i-paraben ngokuphelele, ngakho-ke ayibangeli ukucasuka, amakha ayingozi, futhi ayibangeli induna esikhumbeni. Umkhiqizo ubuye ukalwe njengofanele zonke izinhlobo zesikhumba, okuhlanganisa nesikhumba esinezinduna, esizwelayo noma esinezinduna.
Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ubuye ube ne-Squalane, amafutha e-primrose yakusihlwa, amafutha abalulekile e-lavender kanye ne-turmeric ehlanzekile. Ngenxa yalokho, kusiza ukwandisa ukukhiqizwa kwe-collagen esikhumbeni, kuvimbele ukuguga futhi kusize isikhumba sihlale sibushelelezi, sigcwele amandla.
Intengo yesithenjwa: 1,500,000 VND.
Ngenhla ngu Imigqa ye-serum ka-Kiehl ephezulu eyi-5 ethandwa kakhulu futhi ethenjwa amakholwa obuhle namuhla. Ngethemba ngalolu lwazi uzokhetha ngokushesha i-serum ye-Kiehl elungile. Ngaleyo ndlela ngcono futhi sondle isikhumba ngokuphumelelayo, sithambile futhi sisemusha kusukela ekujuleni kwangaphakathi.
>>>Funda kabanzi: Top 8 ephumelela kakhulu blackhead and acne treatment serum namuhla
Xem Thêm Top 8 Cuốn sách văn học nước ngoài hay được yêu thích nhất | Muasalebang
[Review] Top 3 Kem mắt SK-II nào tốt hiệu quả nhất hiện nay | Muasalebang